SEO & amp; Onyonyo Digital - Ọkachamara nke Na-ahụ Maka Mmiri
SEO & Onyonyo Digital - Ọkachamara nke Na-ahụ Maka Mmiri
Cheedị na ị nwere ụlọ ahịa na-enweghị ụdị signage na ya. Ndị kasị mma, ndị nwere mmasị nwere ike ịdata iji chọpụta ngwaahịa ma ọ bụ rịọ maka ngwaahịa ndị na-enweghị ihe jikọrọ ya na ihe ị na-ere. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa na a aha kwesịrị ekwesị na ihe oyiyi nke ngwaahịa ndị ị na-ere? Nke a ga - eme ka ndị ahịa nwee ike ịlele, jụọ ajụjụ gbasarangwaahịa na ọbụna ịzụta ụfọdụ ngwaahịa - jerseystoffe baby. O yiri ka atụmanya ndị a hà ga-agbasara ndị ọzọ okwu banyere ụlọ ahịa gị na ngwaahịa gịnke a na - aputa n'ime ahia karia ahia. Ihe atụ mbụ bụ nke yiri otu saịtị nke a na-ejighị emeli mgbe nke abụọ ihe gbasara otu ebe kachasị mma.
Onye ọkachamara nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Andrew Dyhan, kọwapụtara n'ụzọ doro anya otu ụzọ esi ejikọta SEO na azụmahịa ahịa dijitalụ.
Nyochacha njirimara search (SEO) bụ usoro nke ime ka saịtị dị mfe ịmata,dị mfe ịkọ na igwu. N'ebe kachasị elu, njikarịcha enyere ndị na-azụ ahịa aka ịchọta azụmahịa gị n'etiti ọtụtụ puku mmadụ ọtụtụ nde ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma bụrụ akụkụ dị mkpa nke usoro ahịa ahia ọ bụla.
SEO chọrọ iji ụgbọala na-eme ka ndị ọrụ gaa na azụmahịa gị. Iji mezuo nke a,ebe nrụọrụ weebụ gị ga-ebuli elu na njikwa search engine results (SERP). Iji mee ka nke a di mfe nghọta, lee uzo zuru oke:
Kwa ọnwa, e nwere ihe karịrị ijeri iri na anọ nyochara online. Ugbu a, chee echiche ga - eme ma ọ bụrụ na ọnụọgụgụ nke nchọnchọ iri na anọ na - achọ azụmahịa gị. Iji nweta okporo ụzọ dị mkpa na-eduga na saịtị gị, naụlọ ọrụ ga-ebuli elu na SERP, kwụọ ụgwọ ọrụ ọ bụla na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Maka azụmahịa ọ bụla ị ga-eme nke ọma, ọ ghaghị ịkpọsara ya. Na maka azụmahịa ọ bụla n'ịntanetị,SEO bụ otu nke mgbasa ozi n'efu. Ịchọpụta saịtị gị na-eme ka ọ dị mfe ịkwado na ibe mbụ nke SERP.
Ebe ọ bụ na enwere nkwenkwe na ndị mmadụ na-enyocha ma nyochaa peeji abụọ nke SERP,ogo na peeji mbụ na-enye ohere ịzụ ahịa gị site n'aka ndị na-achọ ozi n'ihu ịzụta ngwaahịa.
Olee otu SEO si arụ ọrụ?
Ndị na-achọ crawlers na-eji ederede iji chọpụta ọdịnaya nke akwụkwọihe omume nke na-eweta nsonaazụ ọchụchọ gụnyere nsị, ịgụ ihe, na ntinye aha na nyochaa mkpa na mgbake.Ihe ndị a maara iji nye aka na njirimara akara gụnyere:
Meta na mkpado
Mmiri na njikwa
URL na aha ebe nrụọrụ weebụ
Iji ghọta otú usoro a si arụ ọrụ, ọ dị mkpa ịbanye na nkọwa banyere otu SEO si arụ ọrụ:
Ozugbo udide na-agwụ agwụ, a na-echekwa ibe ma ọ bụ debe ya na a nnukwu nchekwa data ebe a na-ewepụta ozi dị mkpa mgbe ọ bụla onye ọrụ na-abanye otu isiokwu na engines ọchụchọ.
3. Chọọ ọrụ:
Mgbe ọ bụla a natara ọchụchọ, engine nyocha ahụ na-eme arịrịọ ahụ ma jiri ya tụnyere ihe ederede. Iji nye data ziri ezi, engine engine ga-atụle mkpa nke niile ibe na egwuregwu ha na ederede data, na isiokwu abanye na SERP.
Nke a bụ ngwá ọrụ nchọpụta nke a na-eme iji sụgharịa isiokwu ndị a kọwaa na URL na ahịrịokwu ndị dị mkpa. Ọ na-atụle ka o nwere ike ịzaghachi ma weghachite ibe ya na ahịrịokwu ahụ ma ọ bụ okwu nke a malitere n'oge ọchụchọ. N'ụzọ bụ isi, e nwere 3 algọridim: On-saịtị, Gbanyụọ-saịtị na dum-saịtị algọridim.
Ụdị algorithm ọ bụla na-ele ebe dị iche iche nke ibe weebụ gụnyerenjikọ, mkpado meta, isiokwu njupụta na mkpado aha. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ọchụchọ na-edozi algọridim ha, ị ghaghị ịnọgide na-agbasomgbanwe iji mee ka ọkwa dị elu.
Ihe ngwụcha nke usoro a gosipụtara na nsonaazụ ọchụchọ.
Njikọ dị n'etiti SEO na azụmahịa dijitalụ
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti SEO na ahịa dijitalụ,iji dokwuo anya nke a, ọ dị mkpa iji nyochaa ha nke ọma. A na-eji SEO eme ihe n 'ọbịbịa. N'aka nke ọzọ, dijitalụ Ebumnuche a na-eji eme ihe n'igwe n'inwe ihe omuma nke a na-acho ihe omuma. Iji nyere aka n'ịzụ ahịa n'ịntanetịeme nke ọma, ị kwesịrị ị na-azụlite usoro mgbasa ozi di egwu nke na-akwụ ụgwọ ma tinye ebe dị irè SEO atụmatụ.
SEO-Ahịa ahia di omimi
Ụfọdụ ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa na-ezo aka na SEO zuru ezu dịka nke dijitalụ dijitalụ ahịa. More na ndị ọzọ, SEO na-arụ ọrụ dị oke egwu nke azụmahịa dijitalụ dị irè. Iji ghọta nke a, ọ dị gị mkpa ịghọta ego ole SEO gbanwere kemgbe ọtụtụ afọ. Usoro ndị dị irè na 90 ma ọ bụ 2011 abụrụla oge nke na-achọ ụzọ ọhụrụ.Taa, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ eji eme ihe banyere SEO tinyere mgbasa ozi ọha na eze na njikọ ndị a ma ama na-adịghị ka n'oge gara aga.
Ịmepụta atụmatụ SEO dị irè
Iji nweta usoro SEO dị ukwuu, ịkwesịrị itinye ebe SEO dị irè atụmatụ. Ezi atụmatụ gụnyere:
1. Ahịa ahịa:
SEO dị irè abụghị naanị maka ịkwọ ụgbọala gaa na saịtị gị, ọ ga-enyere aka iji mee ka ndị mmadụ nweta akara ngosi na ọnọdụ ala iji jide n'aka na ị na-eru atụmanya nwere mmasị na ngwaahịa gị.
2. Ntugharị ihu-n'anya na-edozi:
Google na-achọ na ebe nrụọrụ weebụ na-abanye na ngwaọrụ mkpanaka ma nye nhaafọ ojuju na ndị ọrụ na ngwaọrụ ndị a dịka ndị na-eji kọmputa.
3. Nhọrọ ndị ọzọ na engines ọchụchọ:
Iji dị irè, saịtị gị ekwesịghị ịme nke ọma na otu search engine ma gafee ihe nchọgharị ndị ọzọ.
4. Keywords na-agbaso iji laghachi na ego:
Lekwasị anya na ịchọta na iji okwu ndị dị mkpa na ndị mmadụ jiri icho maka ozi iji kwenye ROI.
5. Ogoju ọdịnaya na ebe doro anya:
Ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị ịbụ enyi na ndị ọrụ, doro anya na ịnyagharịa na kwesịrị ịnwe ọdịnaya ọdịnaya.
N'ikpeazụ, na ụwa nke agbanwe agbanwe algọridim, ị kwesịrị ịma mgbe niile SEO bụ usoro na-adịghị agwụ agwụ. Iji nyere gị aka ime nke ọma n'etiti mgbanwe ndị a nile, chee echiche banyere ndị na-ege gị ntị, tinye ya n'ọnọdụ siri ike atụmatụ kachasị mma ma chee echiche maka iji ọrụ gị.